NYI LYNN SECK 18+ DEN: Blogban (no Broadband!)
ဘလော့ဂါ ဆီမီနာတွေ ပြီးသွားတော့မှ ဘလော့ဂ်ကို ဘန်းတာတွေ တွေ့လာရပါတယ်။ အရင်က ကျွန်တှော ဘန်းတာ မကြုံဖူးဘူး။ ထူးဆန်းတယ်နှော။ ဘယ်သူ့ဘလော့ဂ်တွေ အဘန်းခံထား ရတယ်ဆိုတာတော့ အားလုံး မသိသေးဘူး။ စာရင်း ပြုစုလိုက်ဦးမယ်။
Posted by NLS at 9/03/2007 06:29:00 PM
No response to “Blogban (no Broadband!)”